Ultrasonic နက်ရှိုင်းသောမျက်နှာသန့်ရှင်းရေးအသားရေ Scrubber ကို ၀ ယ်ပါ WoopShop®
Ultrasonic နက်ရှိုင်းသောမျက်နှာသန့်ရှင်းရေးအရေပြား Scrubber
$44.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $99.99
မှစ. သင်္ဘောများ တရုတ်နိုင်ငံ စပိန် ရုရှားပြည်ထောင်စု
အရောင် ပန်းရောင် စိမ်းလန်းသော အဖြူ
တရုတ် / ပန်းရောင် စပိန် / ပန်းရောင် စပိန် / အစိမ်းရောင် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / အစိမ်းရောင် စပိန် / အဖြူ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / အဖြူရောင် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / ပန်းရောင် တရုတ် / အဖြူ တရုတ် / အစိမ်းရောင်
Ultrasonic နက်ရှိုင်းသောမျက်နှာသန့်ရှင်းရေးအရေပြားကိုပွတ်ဆေး - China / Pink backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
Power ကရင်းမြစ်: အားပြန်သွင်းနိုင်ဘက်ထရီ
အမျိုးအစား: Skin Scrubber, ဦးltrasonic မျက်နှာ Scrubber, မျက်နှာသန့်ရှင်းရေးကိရိယာ
ဗို့: DC က 5V
rated ပါဝါ: 1.5W
ကုန်ပစ္စည်းပစ္စည်း: ကို ABS
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား - 43x15x172mm
Net ကအလေးချိန်: 76g
စဉ်ဆက်မပြတ်အသုံးပြုသောအချိန် - ၅၀ မိနစ်
ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်များ၊ နှေးကွေးစွာနေပါ၊ မိတ်ကပ်စသည်ဖြင့်အသားအရေပြBlackနာများစွာဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဥပမာ Blackheads နှင့် Acne ကဲ့သို့သောဤပြproblemsနာများကိုကျွန်ုပ်တို့၏စက်ဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်သည်။
modes ၄ ခု၊ ဘက်စုံသုံးသန့်စင်ဆေး: ion + Export, ion- Import၊ Ultrasonic နည်းပညာ၊ EMS microcurrent
Ultrasonic တုန်ခါမှုနှုန်း 24000Hz - တစ်စက္ကန့် - ရေသည် ultrasonic တုန်ခါမှုကြောင့်အက်တမ်ကိုဖယ်ထုတ်ပြီးအညစ်အကြေးများကိုသေးငယ်သောအမှုန်များထဲသို့အသားအရေကိုမထိခိုက်စေဘဲလှုပ်ခါနိုင်သည်။
1x Ultrasonic အရေပြား Scrubber
1x ကို USB Cable ကို
1x အသုံးပြုသူလက်စွဲ (ဘာသာစကားမျိုးစုံ)
1x Flannel အိတ်
ကိယက်ဗ်မြို့တွင်2недели!) всепришлоцелое! спасибо! ещёнепробовалавдействии
ကုန်ပစ္စည်းများသည်အလွန်လျင်မြန်စွာ၊ အရည်အသွေးမြင့်မားစွာရောက်ရှိလာပြီးသေတ္တာတစ်ခုနှင့်အမှုတစ်ခုရှိသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
02.02.2020 အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ မော်စကိုကနေရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းမှပေးပို့။ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ မှာပြီးပြီ အရာအားလုံးပါဝင်တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Bestellte Lieferung နံနက် 02/07/20, Kurier gebracht 02/10/20 နှုန်း။ Sehr schnell und effizient habe ich es noch nicht ausprobiert ။